Ukulungiswa kwe-'The Flowers of Evil 'Kushicilelwe eFrance | Izincwadi Zamanje
UCharles Baudelaire ubuyela embhalweni wamanje eminyakeni eyi-148 ngemuva kokufa kwakhe. Yize sithanda ukudlulisa izindaba zokuthi kutholakale umbhalo wesandla olahlekile wembongi yaseFrance odumile, izindaba esiziletha namuhla zisikhombisa ukuthi umlobi wayenjani.
Isizathu sokuthi imbongi eqalekisiwe ibuyele emakhasini amasiko ukuthi umshicileli waseParis ushicilele okokuqala ubufakazi obalungiswa nguBaudelaire uqobo lweqoqo lakhe lezinkondlo I-Las Izimbali zobubi.
Umbhalo wesandla wokuqala we Izimbali zobubi Akukaze kutholakale, ngakho-ke ubufakazi bokuqala bomshini olungisiwe embhalweni wesandla wombhali ukuphela kwesampula ebhalwe ngesandla esinalo salobuciko bezinkondlo.
Ngaphambi kokunikeza imvume yakhe yokugcina ukuthi lo msebenzi ushicilelwe, ngo-1857, uCharles Baudelaire wayebandakanyeke kakhulu nomhleli wakhe nomngani wakhe u-Auguste Poulet-Malassis, ebhala futhi elungisa ubufakazi bezindaba.
Kulezi zincazelo sibona imbongi egxekayo eyeqa ilungise ngepeni konke okubonakala kungalungile kuye. Encazelweni yakhe sibona uCharles Baudelaire onemininingwane ephelele, okhethwayo, ophelelisa olungisa okhefana abangafanele, ucela ukuthi kushintshwe ifonti, ufuna ukuthi kushintshwe isipelingi segama ... Umbhali ofuna ngenkani ongakaze abonakale evumelana nalokho umphumela, onqenqemeni kokuthanda kakhulu izinto ayazi ukuthi kuzoba ngumsebenzi wempilo yakhe yonke.
Lobu bufakazi obulungisiwe batholwa yiNational Library yaseFrance ngo-1998 endalini yama-franc angaphezu kwezigidi ezintathu, cishe isigamu sesigidi sama-euro.
Lo msebenzi kungaboniswana nawo kuze kube manje kukhathalogi yedijithali yeNational Library yaseFrance, kepha ngiyabonga Ama-Saints Pères zishicilelwa okokuqala ngqa kuhlobo lwezinombolo oluyoba nenombolo, oluzoba namakhophi angaphezu kwayi-1.000 XNUMX.
Kuthengiswa ngama-euro angama-189, kuyigugu noma iyiphi i-bibliophile engathanda ukuba nayo kulabhulali yakhe yangasese.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » Ukulungiswa kwe-'The Flowers of Evil 'kushicilelwa eFrance